Ahoana ny fomba fanaovana kalandrie | Creatives Online
Isaky ny manomboka ny taona iray, na isaky ny manomboka tetikasa isika, dia mety ho iray amin'ireo asa mahazatra ataontsika ny fahafantarana ny fomba fanaovana kalandrie.
Ny kalandrie dia tsy ilay mihantona eo amin’ny rindrina ihany na ilay iray ahafahantsika manana azy eo am-pelatanana (na ny finday) fa mamela antsika hanoratra daty manan-danja, antsipiriany tsy maintsy raisina isan'andro, sns. Ary noho izany dia tsy mila mandany vola hividianana iray ianao. Afaka mamorona ny anao manokana ianao.
1 Nahoana no manao kalandrie
2 Inona no tokony hotadidinao rehefa manao kalandrie
3 Manaova kalandrie amin'ny Word
4 Manaova kalandrie amin'ny Excel
5 Pejy an-tserasera hanaovana kalandrie voaravaka
Nahoana no manao kalandrie
Eritrereto hoe miasa tena ianao ary miara-miasa amin'ny mpanjifa isan'andro. Manana maromaro ianao ary miasa amin'izy rehetra. Fa ny daty fanaterana, fivoriana, sns. samy hafa ny tsirairay. Ary tianao koa ny mitazona baiko ary mahafantatra izay tokony hataonao isan'andro.
Raha manoratra izany amin'ny kahie ianao, dia azo inoana fa hametraka daty hamaritana izay tokony hatao isan'andro. Fa kahie izy io.
Eritrereto izao fa manao toy izany koa ianao, amin'ny a kalandrie noforoninao, izay mety ho isan-kerinandro, isam-bolana na isan-taona ary ny andro tsirairay dia manana ny naotin'ny mpanjifa tsirairay mba hahafantarana izay tokony hataonao. Ity dia azo apetraka eo amin'ny latabatrao, mihantona, sns. Tsy ho hita maso kokoa ve izany?
Mety ho fitaovana tsara ny kahie, na taratasy iray hanoratana ny zava-drehetra, na fandaharam-potoana mihitsy aza. Fa kalandrie mamela anao hampifandray ny daty amin'ny asa ary ho hitanao tsara kokoa ny habetsahan'ny asa anananao inona no atao araka ny andro Na raha manana dokotera ianao, fihaonana amin'ny mpanjifa, sns.
Inona no tokony hotadidinao rehefa manao kalandrie
Ny fanaovana kalandrie dia iray amin'ireo asa mora indrindra azonao atao ho toy ny famoronana. Eny, raha ny marina, iray amin'ireo tsotra indrindra izy io, saingy, miankina amin'ny tsironao sy ny fahaiza-mamorona tianao homena azy, dia mety ho sarotra kokoa na latsaka.
ankapobeny Mila fitaovana iray ihany ny fanaovana kalandrie, toy ny Word, Excel, Photoshop, pejy an-tserasera... ary manana kalandrie eo am-pelatanana. (izay mety ho solosaina na finday) hitarika anao amin'ny daty.
Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe te hanao kalandrie amin'ny volana Janoary ianao. Tsy maintsy ho fantatrao ny andro hianjeran'ny tsirairay amin'izy ireo handikana azy ao amin'ny taratasinao ary hahafahanao manonta azy.
ankoatra, ary Ho safidy dia azonao atao ny misafidy sary, emojis, sary, sns. izay hahatonga ny kalandrie ho hita maso kokoa.
Saingy amin'izany ihany no ahafahanao miasa.
Manaova kalandrie amin'ny Word
Andeha isika hanomboka amin'ny fandaharam-potoana tsotra. Azonao atao izany amin'ny Word na programa mitovy amin'izany (OpenOffice, LibreOffice ...). Inona no tokony hataonao?
Sokafy antontan-taratasy vaovao. Manoro hevitra anao izahay mba hametraka ny pejy marindrano satria raha manao izany mitsangana ianao, raha tsy hoe herinandro fotsiny dia tsy ho tsara ary ho kely toerana.
Rehefa manana izany horizontally ianao dia tsy maintsy mamorona latabatra. Ho an'ny tsanganana dia tsy maintsy asiana 7 ary ho an'ny andalana, raha mandritra ny iray volana, 4 na 5. Raha tianao io herinandro io dia iray ihany. Roa raha te-hametraka ny andro amin'ny herinandro ianao (manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady na amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma (raha izany dia tsanganana 5 izany)).
Ny latabatra dia ho manify, fa eto no azonao atao milalao miaraka amin'ny habaka eo anelanelan'ny sela mba hametraka azy ireo mitovy halavirana. Nahoana no manitatra azy ireo? Eny, satria mila toerana ahafahanao manondro ianao. Tsy vitan'ny hoe hametraka ny isa isan'andro ianao fa hamela toerana hanoratana, ohatra, fihaonana amin'ny mpanjifa, dia miala sasatra, izay tsy maintsy ataonao isan'andro, sns.
Ny tsara indrindra amin'ity kalandrie ity dia ny iray volana dia mibodo ny pejy iray manontolo, noho izany dia azonao antoka fa mazava tsara ny asa rehetra tokony hataonao. Ny sasany, amin'ny tanjona tsy voatery hanao volana samihafa, ny zavatra ataony dia mamela azy ho banga ary mampiasa azy io ho modely. Izany hoe tsy mametraka ny isa izy ireo fa mamela ny latabatra ho banga fotsiny ka rehefa vita pirinty dia apetraka ary azony ampiasaina amin’ny volana samihafa.
Miaraka amin'ity programa ity misy sary azo apetraka fa voafetra ny fomba fitondrana azy na ny toerana misy azy.
Raha tianao ny hanana kalandrie feno amin'ny takelaka misy ny volana rehetra, dia manoro hevitra anao izahay hanao tabilao isam-bolana, amin'ny fomba izay ahafahanao mampiditra azy rehetra amin'ny takelaka iray ihany amin'ny farany. Ny olana dia tsy hanana toerana hanoratana na inona na inona ianao.
Manaova kalandrie amin'ny Excel
Ny programa iray hafa azonao ampiasaina hanamboarana kalandrie dia Excel. Saika mitovy amin'ny Word izy io fa amin'ny fomba tsotra dia tsotra kokoa satria efa vita ny latabatra.
Manokana, rehefa manokatra Excel ianao, ny hany ataonao dia mametraka ny andro (manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma na avy amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady) ary maka 4-5 andalana.
Raha vao manondro azy ireo ianao dia mandehana miankavia, izay ahitana ny fanisana laharana, ary tsindrio ny bokotra havanana amin'ny totozy. Ao, safidio ny haavon'ny laharana ary apetraho ny halaviran-dàlana tianao amin'ireo andalana ireo (hanome toerana bebe kokoa na latsaka ianao). Zava-dehibe ny tsy handehanantsika pejy iray (izay hilaza aminao raha vao manao preview ianao).
Ankoatr'izay, eo an-tampon'ny tsanganana, voaisa amin'ny litera avy amin'ny A ka hatramin'ny tsy manam-petra, dia azonao atao ny misafidy izay tianao (5 na 7), tsindrio ny bokotra havanana amin'ny totozy ary tadiavo ny sakan'ny Tsanganana mba hanomezana toerana bebe kokoa na kely kokoa.
Rehefa vitanao izany dia tsy maintsy manonta azy fotsiny ianao.
Manoro hevitra anao izahay hamela ny andro amin'ny herinandro ho sanda mahazatra. Amin'izany fomba izany dia ho tsara kokoa.
Raha kalandrie isan-taona no tianao hatao, dia tsy maintsy miasa amin'ny latabatra samihafa ianao. Mety amin'ny takelaka iray ihany izy io, fa isaky ny volana dia ho kely kokoa izy io mba hifanaraka amin'ny endrika tianao hananana na atao pirinty.
Pejy an-tserasera hanaovana kalandrie voaravaka
Raha tsy te hanao latabatra ianao dia apetraho ny habaka ... maninona raha mampiasa môdely an-tserasera? Misy pejy maro sy fitaovana an-tserasera ahafahana manamboatra kalandrie. Raha ny marina, afaka mamorona kalandrie iray volana, telo volana, na isan-taona ianao nefa tsy mila miasa be amin'ny famolavolana azy satria ho avy novolavolaina mialoha izy ireo ary vonona ho anao hanamboatra kely ary dia izay.
Algunas de las pejy izay arosonay Izy ireo dia:
Ary mazava ho azy fa afaka koa ianao misafidy ny hanao izany amin'ny Photoshop, GIMP na programa fanovana sary hafa. Haharitra kely izany, saingy azonao atao ny manamboatra azy io amin'ny fomba feno.
Matetika ve ianao no manao kalandrie isam-bolana? Sahy manao iray ve ianao izao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana no hanaovana kalandrie